Jacaylku maahan waxaad dhahdo. Jacaylku waa waxa aad samayso. - qarsoodi - Quotes Pedia
Jacaylku waa mid ka mid ah shucuurta ugu sixirka badan ee bini-aadamku abid soo maray. Jeceshahay waxyaabaha kujira dhamaan waxyaabaha ay ubaahantahay si loo bogsado qof gudaha ah Jacaylka dhabta ah iyo kan aan faafin ayaa ah barako kaliya laakiin sidoo kale waa hadiyad weligeed ah oo jannada laga helo.
Jacaylka dhabta ah waa in la kobciyo oo la siiyey wakhti ay ku koraan oo ku faafaan. Jacaylka dhabta ah laguma shaabadeyn karo ama lama shaandheyn karo sida doorashadeenna ah. Jacaylka dhabta ahi dhab ahaantii wuu ku qarsoon yahay falalkayaga. Dadka sida dhabta ah isu xannaaneeya waa inay sidoo kale isku dayaan inay si buuxda isu fahmaan.
Kani kani ma dabooli doono oo keliya isku xirnaan wax ku ool ah laakiin wuxuu sidoo kale naga caawin doonaa inaan si wanaagsan isu aqoonno. Jacaylka shuruud la’aanta ah, haddii khibraddiisa qaabkiisu run yahay, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu qiimaha badan ee qofku weligiis ku arki karo noloshiisa ama nolosheeda.
Ma jiro adduun hodan ah oo iibsan kara jacayl aan sharrax lahayn iyo shuruud la’aan. Jacaylka dhabta ahi waa qarsoon yahay xitaa ficilada ugu yar ee qofku u sameeyo qofka isagu ama iyadu daryeesho. Tani waxay u qaadan kartaa qofka aad jeceshahay si ay u dukaameystaan ​​hal mar usbuuc dhammaadka ama kaliya iyada ubax u iibsashada.
Haddii aan eegno muhiimada maaddada waxyaalahaas, waxaan ogaan karnaa in kuwaani yihiin kuwo yar oo aan muhiimad lahayn. In kasta oo aad si qoto dheer u eegto arrintan oo aad falanqeyso shucuurta, waxaan ogaan karnaa in falalkaan yar yari ay yihiin kuwa ugu muhiimsan.
Badanaa, waxaan maqalnaa ballanqaadyo badan oo dhaha markii aan weydiisano qof inuu muujiyo jaceylka uu noo qabo. Haddii aan si taxaddar leh u eegno, waxaan ogaan doonnaa in dadka sida dhabta ah noo jecel ay dhahaan wax ka yar oo wax ka qabashada nolosheena raaxo leh. Tani waa uun qiimo jaban. Dareenka ka soo baxa qalbi run iyo run runti waa dawayn.
Tusaalaha ugu fiican tani waa hooyooyinkeen. Hooyooyinkeen had iyo goor way naga garab taagan yihiin wax walbana way naga caawiyaan iyagoon erey dhihin. Jacaylku waa inuu ahaadaa mid muuqda oo la ogeysiiyo ficillada iyo ma ahan oo keliya ereyo. Jacaylka waxaa lagu sharxi karaa oo keliya ficillo yaryar oo naga mid ah oo si dhab ah u muujinaya.
Waxyaabaha la soo dhaafay waxaa jira inay dib u eegaan qaladaadkeena. Mustaqbalka ayaa loo joogaa si loo hubiyo inaadan ka yeelin kuwa la mid ah. - Qarsoodi
Waxyaabaha la soo dhaafay waxaa jira inay dib u eegaan qaladaadkeena. Mustaqbalka ayaa jira si loo hubiyo inaad…
Tababar maskaxdaada si aad u aragto waxa ugu wanaagsan xaalad kasta. - Qarsoodi
Dadka yididiilo u leh waxay jecel yihiin inay ku noolaadaan nolol ka wanaagsan tan dadka niyad jabsan. Cudurku waa…
Caawinta hal qof ma badali karto adduunka, laakiin waxay u bedeli kartaa adduunka hal qof. - Qarsoodi
Caawinta hal qof ma badali karto adduunka, laakiin waxay u bedeli kartaa adduunka hal qof. -…